The World of Moe Thanzin: ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်
ဖေဖေဦးကျော်ကိုကို မေမေဒေါ်ပွင့်မြူးဇင်တို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ရင်နှစ်သည်းချာ သားလှရတနာလေး "မိုးသံစဉ်ကို" ရဲ့ တစ်နှစ်မြောက် မွေးနေ့မင်္ဂလာကို အထက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ကြွရောက်ချီးမြှင့်ပါရန် ဘလော့လောကသားအပေါင်းအား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်...
နှစ်သစ်ကူးညမှာ ဘာဘီကျူးပါတီလေး ကျင်းပမှာမို့ အားလုံးပဲ အတူတူပျော်ရအောင် မပျက်မကွက် တက်ရောက်ကြစေလိုပါသည်...
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 1:59 PM
Happy Birthday သားသားလေးရေ...
(အဖေအမေများ လက်မှတ်လေးတော့ ပို့ပေးစေချင်ပါသည်...)
အယ်.... သားသားလေးရဲ့ မွေးနေ့က ဒီဇင်ဘာ ၃၁လား ... ဒါဆိုရင်တော့ တီတီနှင်း နဲ့ မွေးလ မွေးရက်တူတယ်...း) မွေးနေ့မှာစ၍ အနာဂတ်မှာ ဖေဖေ မေမေ တို့အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သားကောင်းရတနာလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ တီတီဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ... သားသားလေးရေ ... အာဝါးးးးးးးးးနော်
သားသား"မိုးသံစဉ်ကို"လေး ဖေဖေ မေမေတိုနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ အခါသမယလေး ဖြစ်ပါစေဗျာ။
အနာဂတ်မှာ အရောင်တောက်လာမယ့် တန်ဖိုးရှိ လူသား
လေးတစ်ဦးအဖြစ် အဖေအမေ တို့နဲ့ ချစ်ရသူများနဲ့
MOE THANZIN KO.....
Happy Birthday in advance ပါခင်ဗျာ။
နှစ်ကုန်မှာ မွေးပေမယ့် မကုန်ဆုံးတဲ့ အချစ်တွေရနေမယ့် သားလေး ပျော်ရွှင်ကြည်နူးပါစေကြောင်း တောင်းဆုချွေ..
ံhappy birthday & happy new year လာခဲ့မယ်.. မီးချစ် တို့ လဲ east cost မှာ ဘာဘီကျု့လုပ်မှာ ...
HAPPY BIRTHDAY မိုးသံစဉ်ကို လေးရေ..
လာခဲ့မယ် သားသားရေ။ :)
Happy Birthday ပါ ... သားသားလေး မိုးသံစဉ် ရေ ...
သားလေးကျောင်းတက်ရင် အတန်းထဲမှာ အငယ်ဆုံးဖြစ်တော့မှာပဲနော်...
စကားမစပ် အိမ်ကသမီးလဲ ဒီဇင်ဘာဖွားပဲလေ ...
Happy Birthday...** မိုးသံစဉ်ကို **
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့လေးမှ သည် ဖေဖေ၊မေမေ တို့နဲ့အတူ
သားသားက ၁ ရက်ထဲနဲ့ ၂၀၀၈ လို့ မှတ်လိုက်ရတာပေါ့နော်။
်ဘယ်ကို(ဘယ်နိုင်ငံကို) လာခဲ့ရမှာလဲရှင်---။ သားသားလေးအတွက် မီးမီး(အရုပ်)လေးလက်ဆောင်ယူလာရမှာပေါ့။
ံHappy Birthday ပါသားသားလေးရေ :-)
ကြီးလာရင် ဘလော့ဂ်ဂါလုပ်ဦးမလား ...
ထာဝရ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ... အခက်အခဲများကြုံလည်း ရဲရင့်ရင်ဆိုင်ရဲသောသူ ဖြစ်ပါစေ ... ဆုတောင်းပေးပါတယ်
စားရ အုံးမယ် ...
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ သားသား "မိုးသံစဉ်ကို" ရေ................
Happy Birthday ပါသားလေးရေ
ကျန်းမာပျော်ရွှင် ဉာဏ်ပညာနဲ့ ပြည့်စုံပြီး
ဖေဖေမေမေတို့ အပေါ် သိတတ်နားလည်တဲ့
Happy Birthday သားသားရေ
Happy Birthday Moe Than Zin Ko,
Sorry that uncle didn't happen to attend Birthday Party.
"Wishing youaHappy Birthday and many more to come."
Journey of မိုးသံစဉ်